March « 2020 « Online Tv Nepal
कोरोना रोकथामको लागि हिमानीबाट २ करोड सहयोग सम्मान स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस
यति त कुनै नेताले पनि गरेका छैनन् ! कोरोना रोकथामको लागि हिमानीबाट २ करोड सहयोग सम्मान स्वरूप 1 शेयर गर्नुहोस
नेपालीलाई नै नेपाल छिर्न नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोशित भएका छन् । आफ्नो देशमा आउन जनताले नारा जुलुस गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन् । ट्‍विटरमार्फत सर्वसाधारण जनताले आफ्नै देशमा आउन लागि नारा जुलुस गर्नुपर्ने यो कस्तो अवस्था हो भन्दै उनले प्रश्‍न गरेका हुन् ।उनले लेखेका
नेपालीलाई नै नेपाल छिर्न नदिएको भन्दै देउवा आक्रोशित !
नेपालीलाई नै नेपाल छिर्न नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोशित भएका छन् । आफ्नो देशमा आउन जनताले नारा जुलुस गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन् । ट्‍विटरमार्फत सर्वसाधारण जनताले आफ्नै देशमा आउन लागि नारा जुलुस गर्नुपर्ने यो कस्तो अवस्था हो भन्दै उनले प्रश्‍न गरेका हुन् । उनले
हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला सपना देख्ने गर्दछन् । धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ । यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटनाको अग्रीम जानकारी गराउने मान्यता छ । यस्ता सपनामा देखियो बस्तु वा स्थानले मानिसमा सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै प्रकारका असर पार्ने गर्दछ । कतिपय
चैते नवरात्रिमा यी ६ राशीको भाग्य चम्किँदै ! जानी राखौ
चैत १२ गतेबाट चैते नवरात्रि शुरु भएको छ । चैत १९ गते अष्टमीका दिन चैते दशैं मनाएर नवरात्र सम्पन्न हुन्छ । यस अवधीमा गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रहले आफ्नो राशी परिवर्तन गर्नेछ । बृहस्पती चैत १६ गते रातको ७ बजेर २३ मिनेटबाट मकर राशीमा प्रवेश गर्नेछ । वैदिक ज्योतिष अनुसार बृहस्पतीको
ग्यासको सिलिण्डर बोकाएर बसाएको घटनामा छानविन सुरु !
ग्यास सिलिण्डर बोकाएर सडकमा बसाएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीले सडकमा सिलिण्डर बोकाएर बसाएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो । त्यसपछि के उद्देश्यले सिलिण्डर बोकाइए भन्ने विषयमा छानविन थालिएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उमेशराज जोशीले तस्वीर सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिहरुसँग
हिमानी कोषद्वारा नेपाल सरकारलाई २ करोड सहयोग !
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को रोकथामका लागि हिमानी कोषले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा २ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । दुःख कष्ट र आपत विपदको घडीमा सबैका
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! चैत्र १९ गते बुधबारको राशिफल
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराए पनि प्रयत्न गर्दा सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला । वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो ) विछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट
कोरोना संक्रमण रोक्न भारतमा नयाँ प्रविधिको विकास, एक घन्टाभित्रै मार्छ भाइरस !
भारतको पुणेस्थित एक इन्क्युुबेटर कम्पनीले विकास गरेको एउटा प्रविधिक कोरोनाभाइरसविरुद्ध लडाइँमा धरिलो हतियार बन्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाद्वारा सुरु गरेको निधि प्रयास कार्यक्रमअन्तर्गत निगेटिभ आयन जेनरेटर मेसिनको विकास गरिएको हो। यो आयन मेसिनमार्फत एउटा कोठाभित्र रहेको कुनै पनि किसिमको भाइरसको संक्रमणलाई लभभग एक घन्टाभित्र मार्न
पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका युवकलाई कोरोना नभएको पुष्टि !
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार मृत्यु भएका धादिङ खनियाँपानीका ३५ वर्षीय युवकको कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। कोरोना आशंकामा अस्पतालको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको ती युवकको सोमबार मृत्यु भएको थियो। उनी चैत १४ गते भारतबाट नेपाल फर्किएका थिए। अत्यधिक ज्वरो आएका ती युवकलाई नेपाल आएको भोलिपल्टै अस्पताल भर्ना